जुत्ता | Ratopati
कसले गर्‍यो जुत्ताको आविष्कार? access_timeपुस २८, २०७६
प्राचीन कालमा शिकार गर्ने क्रममा आदिमानवहरुले नांगो खुट्टाले नै ढुंगाहरुको भूमिमाथि, बन जंगल तथा डाँडा काँडातिर हिँड्डुल गर्न तथा दौडनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी नांगो खुट्टाले हिँड्दा, दौड्दा ढुंगा तथा काँडाले घोचेर अति नै पीडा दिन्थ्यो । त्यसैले आदिमानवहरुले आफ्नो खुट्ट...
जो कहिल्यै जुत्ता लगाउँदैनन्... access_timeअसोज ९, २०७६
गाडी नचढी मान्छेका दैनिकी चल्छ चल्दैन ? यो जमानामा पनि जुत्ता–चप्पल नलगाउने पनि कोही होलान् ? प्रश्न अलि अनौठो जस्तो लाग्न सक्छ । तर, अझै पनि गाउँतिर औंलामा गन्न सकिने संख्याका जुत्ता–चप्पल नलगाउनेहरु छन् । पहिले पाएनन्, खोजेर लाएनन्, अहिले पाएर पनि...